Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့် (104594-70-9) ≥98% | AASraw
/ ထုတ်ကုန်များ / R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း / Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်
SKU: 104594-70-9. အမျိုးအစား: R & D ဓါတ်ကူပစ္စည်း
AASraw CGMP စည်းမျဉ်းများနှင့် trackable အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကအောက်မှာ Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့် (104594-70-9) ၏အစုလိုက်အပြုံလိုက်အမိန့်မှဂရမ်ကနေပေါင်းစပ်နှင့်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှငျ့အတူရှိ၏။
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်ကိုဗီဒီယို
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့် အခြေခံဇာတ်ကောင်
အမည်: Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 127-129 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
အရောင်: off-White ကအမှုန့်
အသုံးပြုမှုအတွက် Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်, 2-phenylethyl (2E) -3- (3,4-dihydroxyphenyl) acrylic, Phenylethyl caffeate; Phenethyl caffeate; Caffeic အက်ဆစ် 2-phenylethyl Ester; β-Phenylethyl caffeate;
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်သုံးစွဲမှုကို
ဓာတုကုထုံးများနှင့် radiotherapy regimen ၏ဘေးထွက်ဆန့်ကျင်လူနာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Clinician နှင့်ယောဂီတွေတိုးလာစိတ်ဝင်စားမှုကိုဆွဲဆောင်လျက်ရှိသည်။ တက်ကြွစွာအစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ဆက်များအသင်းအဖွဲ့ချုပ်၏ propolis များမှထုတ်ယူသော Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့် (CAPE အမှုန့်), အထူးသ micromolar ပြင်းအားမှာနျူကလီးယားအချက်κBဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့် linoleic acid နှင့် arachidonic အက်ဆစ်၏ 5-lipoxygenase-catalysed အောက်ဆီဂျင်ရပ်တန့်ဖို့စွမ်းရည်ကိုပြသပါ။ CAPE အမှုန့် antiinflammatory, antiproliferative, ဓါတ်တိုး, cytostatic, ဗိုင်းရပ်စ်, antibacterial, antifungal နှင့် antineoplastic သတ္တိလည်းရှိတယ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကို၏ရည်ရွယ်ချက်မှာစမ်းသပ်တိရစ္ဆာန်များအတွက်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့် radiotherapy-သွေးဆောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုတားဆီးဖို့နဲ့လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုအတွက် CAPE အမှုန့်များ၏အလားအလာအသုံးပြုမှုများအတွက်အသစ်တစ်ခုကိုချဉ်းကပ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ Vivo နှင့် CAPE မှုန့်စသည်တို့အသုံးပြုမှုအတွက်အနှစ်ချုပ်ရန်ဖြစ်ပါသည် ဓာတုကုထုံးများနှင့် radiotherapy regimen စဉ်အတွင်းအကာအကွယ်အေးဂျင့်အဖြစ်။
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့် (CAPE အမှုန့်) propolis ၏တက်ကြွသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဆက်များအုံထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်နျူကလီးယားကူးယူအချက်, အဲန်အက်ဖ်-κBတစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ် inhibitor ဖြစ်ပါတယ်။ CAPE အမှုန့်သိသိသာသာရောင်ရမ်းနေစဉ်အတွင်း arachidonic အက်ဆစ်ဇီဝြဖစ်၏ lipoxygenase လမ်းကြောင်းနှိမ်နင်းရန်ပြသလျက်ရှိသည်။ Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်ခ်ျအိုင်ဗွီ-1 နဲ့ Integrase ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်နှင့်လည်းအသွင်ပြောင်းဆဲလ်ပြန့်ပွားဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ဒါဟာအသွင်ပြောင်း fibroblasts အတွက် apoptosis induces နှင့်ပရိုတိန်း kinase C နဲ့ ornithine decarboxylase လှုပ်ရှားမှုနှစ်ဦးစလုံးထိခိုက် EGF signal ကို transduction နှောင့်ယှက်။
ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းများ Gene စည်းမျဉ်းဥပဒေသုတေသနများအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအထူးအသားပေး Gene စည်းမျဉ်းဥပဒေထုတ်ကုန်ရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။ sigma.com/discover-bsm မှာသုတေသန၏အခြားဒေသများများအတွက် bioactive သေးငယ်တဲ့မော်လီကျူးများအကြောင်းကိုပိုမိုလေ့လာပါ။
ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းလည်း Pharmacologically Active ကိုဒြပ်ပေါင်းများ Sigma ရဲ့စာကြည့်တိုက်, High-အရည်အသွေး, အဆင်သင့်-to-screen ကိုဒြပ်ပေါင်းများကိုတစ်ဇီဝမှတ်ချက်တွေစုဆောင်းခြင်းရဲ့အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်ကမ်းလှမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့် (CAPE အမှုန့်) propolis ထုတ်ယူတဲ့ bioactive ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါစာပေရှာဖွေရေး CAPE အမှုန့်မွှား, ဓါတ်တိုး, Anti-inflammatory နှင့် cytotoxic ဂုဏ်သတ္တိများပိုင်ဆိုင်အသေးစိတ်အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုဆောင်းပါး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာတက် Sum နှင့်ပြင်းထန်စွာကွဲပြားခြားနားသောရောဂါများအတွက် CAPE မှုန့်ကုထုံးဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုလက်ရှိဒေတာအကဲဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်ကြောင့် CAPE အမှုန့်အသေးစိတ်ရှင်းပြနေတဲ့စွယ်စုံကုထုံးတက်ကြွ polyphenolic နှင့်ကုထုံးထိရောက်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု-သွေးဆောင်အဆိပ်လျော့ကျလာများအတွက်ဓာတုကုထုံးတစ်ခုထိရောက်သော adjuvant ဖြစ်ပါတယ်။
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်အပေါ်သတိပေး
အဆိုပါ CAPE အမှုန့်ကို C & L ကို Inventory မှ 72 အကြောင်းကြားစာများထံမှ3ကုမ္ပဏီများကပေးစုပေါင်း GHS သတင်းအချက်အလက်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအကြောင်းကြားစာမျိုးစုံကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်စပ်နိုင်ပါသည်။
H315 (100%): H319 (100%) [အရေပြားချေး / ယားယံသတိပေး] အသားအရေယားယံစေတယ်: H335 (98.61%) [ပြင်းထန်မျက်စိပျက်စီးမှု / မျက်စိယားယံသတိပေး] လေးနက်မျက်စိယားယံစေတယ်: အတိအကျပစ်မှတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုသတိပေး [အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယားယံစေနိုင်ပါစေ အဆိပ်, တစ်ခုတည်းထိတွေ့; အသက်ရှူလမ်းကြောင်းယားယံ]
ပြန်ကြားရေးအညစ်အကြေးနောက်ထပ်နှင့်အခြားအချက်များပေါ်တွင် မူတည်. အကြောင်းကြားစာများအကြားကွဲပြားလိမ့်မည်။ ကွင်းအတွင်းရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးအားအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည် codes တွေကိုပေးသည့်ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်အကြောင်းကြားခွဲခြားအချိုးဖော်ပြသည်။ 10% အထက်ရာခိုင်နှုန်းတန်ဖိုးများနှင့်အတူသာလျှင်အန္တရာယ် codes တွေကိုပြသနေကြတယ်။
P261, P264, P271, P280, P302 + P352, P304 + P340, P305 + P351 + P338, P312, P321, P332 + P313, P337 + P313, P362, P403 + P233, P405 နှင့် P501
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester (CAPE) အမှုန့်ထိုကဲ့သို့သောမွှား, ဓါတ်တိုး, Anti-inflammatory နှင့် cytotoxicity လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများ, အပိုင်အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကုထုံးအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့သွားလျှင်ကြိုတင်စုံစမ်းစစ်ဆေး CAPE အမှုန့်များ၏လက်တွေ့အလားအလာအဆိပ်အကြောင်းကိုလိုအပ်သည်။ ကျယ်ပြန့်စာပေအချို့သုတေသနဒေသများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့သောဒေသများတွင်အလွန်လျော့နည်းသို့မဟုတ်မစူးစမ်းပါ၏ ထို့ကွောငျ့, ဝေဒနာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကုထုံးကုသမှုအဘို့ဤဘုံနှင့်စီးပွားရေး polyphenolic သုံးစွဲဖို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်သောနှင့်အဆိုပြုထားကြပါတယ်။
တိရိစ္ဆာန်မော်ဒယ်များ၌စသည်တို့ဆေးဝါးဗေဒနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၏တစ်ဦးအမျိုးမျိုး CAPE အမှုန့်များအတွက်အစီရင်ခံခဲ့ကြပေမယ့်သူတို့ရဲ့လက်တွေ့အရေးပါမှုကိုမသိနိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာစသည်တို့အတွက် antimitogenic anticarcinogenic, Anti-inflammatory နှင့် immunomodulatory သတ္တိလည်းရှိတယ်။ နောက်ထပ်လေ့လာမှုလည်း CAPE အမှုန့်စသည်တို့အတွက်စူးရှကိုယ်ခံစွမ်းအားနှင့်ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုဖိနှိပ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ကြွက်အသားအရေပျား propolis နဲ့ကုသနဲ့ဘိလပ်မြေ, အရေပြား papillomas သွေးဆောင်တဲ့ဓာတုထိတွေ့သောအခါဤသည် Anti-ကင်ဆာအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလည်းမြင်ရ၏။ CAPE အမှုန့်သိသိသာသာ papillomas ၏နံပါတ်လျှော့ချ။
ရှေ့စာပေစဉ်းစား, CAPE အမှုန့်ထိုကဲ့သို့သောမွှား, ဓါတ်တိုး, Anti-inflammatory နှင့် cytotoxicity လှုပ်ရှားမှုများအဖြစ်အမျိုးမျိုးသောလှုပ်ရှားမှုများ, အပိုင်အကြံပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကုထုံးအေးဂျင့်အဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့သွားလျှင်ကြိုတင်စုံစမ်းစစ်ဆေး CAPE အမှုန့်များ၏လက်တွေ့အလားအလာအဆိပ်အကြောင်းကိုလိုအပ်သည်။ ကျယ်ပြန့်စာပေအချို့သုတေသနဒေသများပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အချို့သောဒေသများတွင်အလွန်လျော့နည်းသို့မဟုတ်မစူးစမ်းပါ၏ ထို့ကွောငျ့, ဝေဒနာတွေရဲ့အကောင်းဆုံးကုထုံးကုသမှုအဘို့ဤဘုံနှင့်စီးပွားရေး polyphenolic သုံးစွဲဖို့နောက်ထပ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလိုအပ်သောနှင့်အဆိုပြုထားကြပါတယ်။
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်စျေးကွက်
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်ကိုဝယ်ဖို့ကိုဘယ်လို; AASraw ထံမှ CAPE အမှုန့်ကိုဝယ်
Caffeic အက်ဆစ် Phenethyl Ester အမှုန့်ချက်ပြုတ်နည်း: